Tuesday June 14, 2022 - 16:28:24
Taliska guud ee ciidanka Faransiiska ayaa ku dhawaaqay maanta oo talaado ah in uu bilaabay wareejinta saldhiggii ay ku lahaayeen magaalada Menaka ee dhacda bartmaha wadanka ayna Faransiisku isku diyaarinayaan bixitaan dhammeystiran dabayaaqadda sanadkan.
"si dhammeystiran oo nidaamsan misna ammaan ah ayaan ula baxnay ciidamadii nooga sugnaa magaalada Menaka kuwaas oo qeyb ka ahaa howlgalka Barkhaan, ciidamadan waxay qaabilsanaayeen ilaalinta deegaannada sedax xagal xuduudeedka" ayuu yiri taliyaha guud ee ciidamada Faransiiska.
Bayaan kale oo kasoo baxay wasaaradda difaaca xukuumadda Paris ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay qeyb ka tahay qorshe uu bishii Feberaayo ee lasoo dhaafay uu dejiyay Madaxweyne Macron qorshahaas ayaa dhigaya in ciidamada Faransiiska si tartiib tartiib ah loogasoo saaro dalka Maali.
Sanaddii 2014-kii ayuu Faransiisku dalka Maali ku faafiyay ciidamo gaaraya 5000 oo askari kuwaas oo hormuud unoqday taxaaluf ay ugu magac dareen Barkhaan, ciidamo ashahadda ladirir ah oo ka socday isbahaysiga G5 oo kala ah Burkina Faso, Jaad, Muritaaniya iyo Niger ayaa ka qeyb qaadanayay duullaanka gardarrada ah ee Maali lagu qaaday.
Ciidamada Faransiiska ee isaga baxay magaalada Meneka ayaa ubaqoolay dhanka saldhigga BAP ee magaalada Niami ee caasimadda Niger oo qiyaastii 1340Km (883 Mile) ujirta Maali.
Jeneraallada Faransiiska ee weji gabaxa kalasoo kulmay dagaalka Maali waxay ku doodayaan in dalka Niger ay kasii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero Argagaxisada.
Bishii May ee lasoo dhaafay ayay xukuumadda Maali ka baxday dhammaan heshiisyadii dhanka difaaca iyo amniga ee kala dhaxeeyay Faransiiska iyo howlgalka midowga Yurub ee Maali arrinkaas oo dowladaha shisheeye ku qasbaya in ay ciidamadooda kala baxaan dalkan dhaca galbeedka Afrika.